Programme PROSPERERAmboakarivo - Fenoarivo Atsinanana: miroborobo ny voly anana ataon'i Judicaël, KAOPERATIVA VONONA - Programme PROSPERER Amboakarivo - Fenoarivo Atsinanana: miroborobo ny voly anana ataon'i Judicaël, KAOPERATIVA VONONA - Programme PROSPERER
Ny kaoperativa VONONA dia fivondronana mpamboly maromaro ao amin’ny fokontanin’Amboakarivo kaominina Ambondimanga-II, Distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo. Iray amin’ireo kaoperativa mahazo tohana amin’ny zotram-piharina ‘’CUMA’’ (voly angivy sy anana) avy amin’ny Fandaharanasa PROSPERER ity Kaoperativa ity. Tena miroborobo tokoa ny famokarana ataon’izy ireo raha ampitahaina amin’ireo mpamboly sasany any amin’ny faritra misy azy. Izany dia vokatry ny fikirizan’ireo mpikambana ao aminy.
Mpikambana iray ao i Judicaël, mpamboly angivy sy anamalao izy ary tena fakan-tahaka tokoa raha ny amin’io sehatra io. Tovolahy nianatra tany Fenoarivo izy taloha fa tsy nahatody hatramin’ny farany ka dia nanapak’hevitra ny niverina namboly anana tany an-tanindrazana indray. Sahirana Judicael teo amin’ny famelomana ny fianakaviany. Toeram-pambolena kely 1 ara no mba nananany ho an’ny fambolena anana ary 3 ara ny tanimbary. Tsy mahasahana ny filan’ny fianakaviany mandritra ny taona ny vokatra azony tamin’izany. Tsizarizary ny fiainany, zara raha mihinan-kena indray mandeha isam-bolana ary voatery mitrosa foana mba ahafahana manatanteraka ny filàna.
Tamin’ny taona 2016, nanomboka nahazo tohana tamin’ny Fandaharanasa FANOITRA i Judicaël. Nahazo fiofanana isan-karazany izy sady isan’ny mpikambana ao anaty GVEC ihany koa.
Niroborobo fatratra ny asa fambolena angivy sy anana nataon’i Judicael. Raha ny angivy manokana no jerena, nahavokatra angivy 5 400 kapoaka izy ary 400Ar ny vidin’ny iray kapoaka. Izany hoe mitentina 2 160 000Ar ny vola azo tamin’ny angivy fotsiny ny taona 2017. Nitombo avo fito heny ny velaran-tany niasana ny taona 2018 ka vola 9 000 000 Ar no vola azo satria tafiakatra 18 000 Kapoaka ny vokatra azo, amin’ny 500Ar ny iray kapoaka.
Raha atao kajy tsotsotra izany dia tafiakatra mihoatran’ny 10 000 000 ariary ny vola niditra taminy nandritra ny taona 2018 raha ny vokatra angivy no resahina. Tena vokatra tsara tokoa izany ary mendri-piderana tokoa izy ka vokat’izany dia hireharehan’ny mpikambana miaraka aminy izy any amin’izay rehetra alehany.
Hoy izy : «…tsy nanenina izaho nanipy ‘gant’ tamin’ny fianarana fa mampanjary ny voly anana…». Manamarina izany teniny izany ny vokatra azony voatanisa rehetra ireo.
Faly Judicaël satria afa-pahasahiranana izy sy ny fianakaviany. Ankehitriny dia nahavita zavatra mivaingana maromaro izy: fahazoana omby miisa iray sy moto Jog 50 iray mba hitaomana ny vokatra mivoaka. Tsy vitan’izany ihany fa nahavita nanokatra toeram-pivarotana madinika ao an-toerana ho an’ny vadiny koa izy. Ankehitriny dia manangona fitaovana fanorenana trano toy ny hazo sy ny vy fotsy izy ary efa manomboka ny fanorenana trano 08M*06M, « semi-dur ».
« Mba hampivoatra hatrany ny fianako, dia vonona mandrakariva izaho hanitatra sy hanatsara ny asa fambolena izay ataoko », nanamafy izy.
Aujourd'hui : 6 vues | Cette semaine : 1178 vues | Total : 6471 vues